५० चार्जिङ स्टेसन बनाउने ठेक्का चीनको स्टार चार्ज कम्पनीलाई, यसै साता सम्झौता हुँदै !
काठमाडौं : उपत्यकासहित देशभर विद्युतीय गाडी चा’र्ज गर्ने ५० चार्जिङ स्टेसन निर्माणको जिम्मा चीनको स्टार चा’र्ज कम्पनीले पाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति’स्पर्धाका आधारमा चा’र्जिङ स्टेसन निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ ।
प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयको विद्युतीय सवारी पूर्वा’धार निर्माण आयोजनाअन्तर्गत चा’र्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग यसै साता ठे’क्का सम्झौ’ता हुने भएको छ । ठे’क्का स\_म्झौताका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र लेखेर बोलाएको आयोजना प्रमुख सागरमणि ज्ञवालीले बताए ।
‘चार्जि’ङ स्टेसन निर्माणका लागि ठे’केदार छनोट भइसक्यो,’ उनले भने, ‘हामीले ठे’क्का पाउने कम्पनीलाई स’म्झौता गर्न आउ भन्ने पत्र दिइसकेका छौं । सम्भवतः यसै साता स\_म्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ ।’ उनले काम सक्न १ वर्षको समय मिल्ने भए पनि ठे’क्का सम्झौ’ता भएको मितिले ६ देखि ८ महिना सबै चार्जिङ स्टेसनको निर्माण पूरा हुने बताए ।
सबै चार्जिङ स्टेसनको निर्माण पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउन ३८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यो लागतभित्र ट्रान्स’फर्मर ख’रिद तथा जडान , हाई तथा लो टेन्सन लाइन तान्ने, सिभिल संरचना निर्माण, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, सफ्टवेयर तथा कम्यु’निकेशन, डिजिटल बिल भुक्ता’नीका लागि ‘पेमेन्ट गेट वे’को संरचना तयार गर्ने लगायत काम हुने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
चार्जिङ स्टे’सन निर्माण गर्न एसियाली विकास बैंकले ऋ’ण लगानी गरेको छ । ५० मध्ये उपत्यकामा ७ वटा चा’र्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनेछ । यसबाहेक पनि बागमति प्रदेशमा १३ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनेछ । उपत्यका बाहिर मलेखु, बिपि राजमार्ग (सिन्धुली), हेटौंडा, भरतपुर, मुङलिन÷कुरिनटार र बनेपामा चार्जिङ स्टेसन राखिनेछ ।
यस्तै, प्रदेश–१ मा भद्रपुर, दमक, कन्काई, इटहरी र विराटनगरमा गरी ५ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुने उनले बताए । प्रदेश–२ मा वीरगन्ज, सिमारा, चन्द्रनिगाहपुर, ढल्केबर, जनकपुरधाम, बर्दिबास र राजबिराज गरी ७ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि ६ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुने उनले बताए । यो प्रदेशमा नवलपुर (पूर्वि नवलपरासी), दमौली, स्याङ्जामा १÷१ वटा तथा पोखरामा ३ चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सूदुर पश्चिम प्रदेशमा क्रमशः ८, १ र ३ वटा गरी १२ चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनेछन् । लुम्बिनीमा नेपालगन्ज, भालुवाङ, बुटवल (३), दाङ र बर्दघाट/सुनवल (२) मा चार्जिङ स्टेसनको संरचना राखिने भएको छ । कर्णालीको सुर्खेतमा एउटा तथा सूदुरपश्चिमको धनगढी, महेन्द्रनगर र डडेलधुरामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने भएको छ ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७ वटै प्रदेशमा गरी १४२ किलोवाटसम्मका चा’र्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दैछ । चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाटको चा’र्जर राखिनेछ । जसमा १२० किलोवाट डिसी र २२ किलोवाट एसी हुनेछ । ३ वटा ‘गन’ हुनेछन् ।
चार्जिङ स्टेसनमा १२० किलोवाटसम्म विद्युत खपत गर्ने विद्युतीय ठूला बस चार्ज गर्न सकिनेछ । चार्जिङ स्टेसनमा ठूलो विद्युतीय बस १ घन्टा २० मिनेटमा पूर्णरूपमा चार्ज गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । एक पटक पूर्णरूपमा चार्ज भइसकेपछि विद्युतीय बस साढे ३ सय किलोमिटरसम्म गुड्ने ज्ञवालीले दा’बी गरे ।
यस्तै, ६० किलोवाटसम्मकाे साना विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न मिल्ने संरचना पनि निर्माण हुनेछ । स्कुटर, माेटर साइकल चार्ज गर्ने मिल्ने ठाउँ पनि बनाइने भएकाे छ । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्बन्धित जिल्लाको संरचना प्रयोग गर्ने ज्ञवालीले बताए । चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम पहिले नै सुरु भइसक्नु पर्ने भए पनि कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको असरले धकेलिएको छ ।-उर्जा खबर बाट
२०७७ चैत्र ११, बुधबार ०१:३८ गते 1 Minute 706 Views
भोलिदेखि नेपालको चुचे नक्सा सहितको एक रूपैयाँको सिक्का प्रचलनमा आउने !
नेपालमा तीन महिनामै २४ करोडको पानी निर्यात !
आजको नेपाली बजारमा मलेसियन रिंगेट सहित विदेशी मुद्राको रेट,भाउ ।